DILII FI TOWBAA - NuuralHudaa
DILII FI TOWBAA
Dhaamsa ajaa’ibaa Ibnu Qayyim al Jowziin dubbate kana qalbisaa. Dilii fi Towbaa irraa haasawee..
Namni Dilii ifii irraa sodaachuu qaba. ‘Rabbiin wal na dhabsiiftee moo?’ ja’ee yaaduu qaba. ‘Dhiiroo malli kiyya maali’ ja’ee if gaafachuu qaba. An nama hedduu kan Dilii irraa deebi’ee Raaheysuun arke. Kan ‘Towbaan tiyya qeebalamte’ ja’ee dantaa dhabu! Kun waan tahuu hin qabne. Towbachuun gaariidha.
Garuu Towbaa saniin Dilii hojjatte Rabbi siif dhiisuufi kaan eentu beeka? Beekuu hin dandeenyu. San waan Rabbi qofti beeku. Osoo Diliin hojjanne nuuf dhiifamteehuu, osoo Towbaan teenya qeebalamteehuu waan godhuu qabnuutu jira. Ibaadaa irratti jabaannee, if gad qabnee, badii hojjanneef sheenawaa, akkasuma sodaachaa deemuu qabna.
Guyyaa Qiyaamaa jabaa san ergamtoonni Rabbii waan godhan mee haa laallu? Rakkoo dadhabanii ummanni hundi manguddummaaf itti dhufnaan hedduun isaanii ni didan. Badii hojjatan qabaachuu himan.
Badii san ba’atanii Rabbi bira manguddummaaf dhaquu sodaatan. ‘Badii hojjanne Rabbi nuuf dhiise’ ja’anii qoma hin dhiibne. Waan yartuu mucucaataniif magantaa seenuu akka hin barbaanne kaasan.
“Nafsii nafsii” ja’an. Nutuu waan nurra gahu hin beynu jechuun magantaa waakkatan.
Badiin isaan hojjatan hin jirtu. Isaan badii hin qaban, qabaataniis waan darreedha. Sanuu Rabbi dhiiseef. Akkasumaa wajjiinuu ulfinaafi hammeenya badii hojjatanii if keessa yaasuu hin dhiifne. Badii xiqqoo(dhiifamni godhameef) saniin Rabbi dura dhaabbachuu qaanfatan.
Nulleen isaanirraa laallachuu qabna. Rahmata Rabbii kajeelaa, Towbaatti jabaachaa deemuu qabna. Takkittii Towbannee, deebinee boonnee bakka duriitti deebi’uun sirrii miti.”
Amiin huseen says:
Assalaamuu aleeykum WRAHMATULLAAHI wabarakaatuhu
qophessitotaa *Nuralhuda* sagantaawwan keeysan hunduu baaye nufayyada jira haaluma kanaan itti nuuf fufa
July 31, 2021 sa;aa 6:38 pm Update tahe